Inguqulelo entsha efumanekayo kwiCash Bandicoot: Ekubalekeni! | IPhone iindaba
Lo mdlalo wokuzonwabisa kunye nokuba ligqala oza kwiVenkile ye App kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo zihlaziyiwe, ndisandula kufumana ingxelo entsha. Kule meko kunjalo Inguqulelo 1.10.28 Kwaye kuyo, izinto ezingaphezulu zongezwa ekuqaleni komdlalo, ukulungiswa kwesihluzo seengxoxo kunye nesandla esihle sezilungiso zeempazamo ezifunyenwe kuhlobo lwangaphambili. Kumanqaku ohlaziyo unokufunda ukuba olu hlaziyo lolwethu lwe-marsupials, utshintsho oluninzi kunye nokuphuculwa kongezwe okunxibelelana ngokufanelekileyo namava omdlalo wokudlala.
Umdlalo ufumaneka simahla kwiVenkile ye App kwaye kule nguqulo intsha iimpazamo ezininzi ezifunyenweyo ziyalungiswa. Ngokuqinisekileyo elona gqala liya kuwazi kakuhle lo mdlalo apho Ukuchola ii-apile ukufikelela esiphelweni sikhuselekile kwaye kuvakala kude kube lutshaba lokugqibela oluya kusinika uloyiso.
Izinto eziguqukayo zomdlalo zilula kwaye nawuphina umsebenzisi anganakho Yonwabela ixesha elifanelekileyo lokubaleka, ukutsiba, ukujika kunye nokwaphula izinto esizifumana phakathi endleleni ude ufike kwiintshaba kunye neentshaba ezikhohlakeleyo zoGqirha uNeo Cortex.
Ngumdlalo owonwabisa ngokwenene esiwucebisayo kubo bonke abasebenzisi ngaphaya kwabo babekhe badlala kwiPlayStation. Ngumdlalo oqhelekileyo oza kusinika ukonwaba kunye neeyure ezininzi zokuzonwabisa. Kule nguqulo yomdlalo siza kulwa noNina Cortex, uDingodile, uGqirha N. Gin, uKwenziwa kweNkohliso, iCoco enkohliso kunye abanye abakhohlakeleyo abaninzi abeba iigugu zethu.
Crash Bandicoot: Ekubalekeni!Mahala
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Ivenkile yosetyenziso » Inguqulelo entsha efumanekayo kwiCash Bandicoot: Ekubalekeni!
Inguqulelo ekudala ilindelwe ye-iOS 14.5 ngoku iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi